Harena mila fantarina, ekena sy hajaina, ary tantanana mirindra anaty fifamenoana ny hasin'ny fahasamihafana fototra voajanahary, lamina nandaharana ny voahary, anohizana, anavaozana, sy andavorarian'Andriamanitra ny tontolo, mba hitondra any amin'ny fahombiazana sy fiadanana. Eo amin'ny sehatry ny ankohonana, fiaraha-monina, firenena, raharaha iraisan'izao tontolo izao. Amin'ny lafiny fo, saina, fanahy, fiaraha-monina.
Mety hanimba ny vehivavy ve ny fanambin'ny vaninandro ankehitriny ?
Naseho ny : 30 desambra 2019
Misy fitsipi-pifehezana avokoa ny sehatra maro samihafa eo amin'ny fiaraha-monina sy ny fiainana andavanandro. Mitaky fifehezan-tena amin'ny lafiny rehetra avy amin'ny tsirairay izany.
Naseho ny : 23 desambra 2019
Fibeazana ara-pahasalaman'ny tsirairay no antom-pisian'ny fandaharana. Atolotra ny fanabeazana, henoina sy fakafakaina ary hanapahan-kevitra.
Pejy 13 amin'ny 15